Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Espaniola » Mandà ny mandat COVID mandà ny klioba espaniola ny fitsarana espaniola
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Nolavin'ny Fitsarana Espaniôla ny baiko mandika ny alim-pandihizana
Ny fitsarana ambony Andalusia dia mihevitra fa tsy maintsy atao ny pasipaoro ara-pahasalamana hamangy ny toerana misy ny fiainana any anaty trano ho fanavakavahana sy fanitsakitsahana ny zon'ny olom-pirenena.
Mikasa ny hanao «pasipaoro COVID-19» tsy maintsy atao hitsidika toeram-pandihizana nopotehin'ny fitsarana.
Ny alatsinainy teo no nanambarana ny drafi-dratsy.
Ny drafitra dia mitaky fanamarinana EU Digital COVID Certificate, fanadinana PCR ratsy, na fanandramana antibody ratsy hitsidihana izay toerana misy ny fiainana alina any Andalusia.
Nolavin'ny Fitsarana Avo momba ny lalànan'ny fitsarana any Andalusia (TSJA) ny drafitra mampiady hevitra izay nitaky ny hanaovana ny pasipaoro COVID-19 ho voatery hitsidika ny toerana rehetra misy ny alina.
Ny fitsarana ambony ao amin'ny faritry ny morontsiraka atsimo dia nanapa-kevitra ny amin'ny fanoherana ny tolo-kevitry ny governemanta ny Andalusia tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity. Ny fanaovana ny pasipaoro ara-pahasalamana tsy maintsy atao mba hitsidihana ireo toeram-pialan-tsasatra an-trano dia heverina ho manavakavaka sy manitsakitsaka ny zon'ny olom-pirenena.
Ny drafitra tsy mandeha amin'ny laoniny dia nambaran'ny filohan'ny governemanta faritra, Juanma Moreno, ny alatsinainy teo. Araka ny voalazan'i Moreno, ny Certificate Digital COVID an'ny EU, ny fitsapana PCR ratsy, na ny fanandramana antibody ratsy dia ilaina ny mitsidika toerana misy fiainana amin'ny alina any Andalusia.
Na dia antenaina hampiharina aza ny fepetra raha vantany vao alakamisy, dia napetraka andro iray monja taorian'ny fanambarana voalohany. Natolotra ny fandinihana mba hijerena ny TSJA, hahazoana "fiarovana ara-dalàna faran'izay lehibe" alohan'ny fampiharana, araka ny nambaran'i Elias Bendodo, mpanampy zokiolona amin'ny filoham-pirenena. Ny didim-pitsarana navoakan'ny fitsarana dia midika fa tsy hihatra mihitsy.
Nandritra ny areti-mandringana, Espaniola dia nanoratra tranga 4.57 tapitrisa tamin'ny Covid-19 ary efa ho 82,000 no maty hatramin'ny zoma. Na izany aza, ny tahan'ny aretina dia mihena satria ny firenena dia toa nandalo ny tampon'ilay karazana Delta mifindra kokoa.
Tamin'ny volana lasa teo, nanapa-kevitra ny Fitsarana Avo momba ny lalàm-panorenan'i Espana fa ny lalàm-panidiana henjana - navoakan'ny governemanta foibe nandritra ny onjam-pivalanana voalohany tamin'ny taona 2020 - dia tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana ihany koa.